မူဆယ်မြို့ ဆင်ဖြူဂိတ်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ ကျယ်ဂေါင်မြို့ ဝင်ထွက်ဂိတ်များ၌ ကုန်တင် သုံးဘီးယ? - Yangon Media Group
မူဆယ်မြို့ ဆင်ဖြူဂိတ်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ ကျယ်ဂေါင်မြို့ ဝင်ထွက်ဂိတ်များ၌ ကုန်တင် သုံးဘီးယ?
မူဆယ်၊ ဇွန် ၄
မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံဝင်ထွက်ဂိတ်များမှ အဝင်အထွက်ပြုလုပ်ရာတွင် အချိန်ကြာ မြင့်စွာ စောင့်ဆိုင်းနေရသည့်အတွက် ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) မူဆယ် မြို့ ဆင်ဖြူဂိတ်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ ကျယ်ဂေါင်မြို့သို့ ဝင်ထွက်သွားလာကြမည့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်မောင်း နှင်သူများစုဝေးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာများမှ ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဇွန် ၄ ရက် နံနက် ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ် ခန့်က မူဆယ်မှ ကျယ်ဂေါင်သို့ ဝင်ထွက်ပြုလုပ်နေသည့် မြန်မာဘက်အခြမ်း ဆင် ဖြူဂိတ်ပေါက်၌ ကုန်တင်သုံးဘီး ယာဉ်အပါအဝင် လူအင်အား ၁ဝဝ ခန့် လူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တရုတ်ဘက်က အကူအညီ တောင်းခံတာကြောင့် မြန်မာအ ခြမ်းမှာ ပိတ်ဆို့နေသူတွေကို မြန်မာနိုင်ငံအမှတ် (၇) လူဝင်မှုကြီး ကြပ်ရေးဌာနခွဲက လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေးတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ မူဆယ်မြို့ နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့က နှစ်နိုင်ငံထွက် ပေါက်ဂိတ်မှာ ပိတ်ဆို့နေသူတွေကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးခဲ့ရတာဖြစ် ကြောင်း မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူး အောင်ကျော်စိုးကပြောကြားသည်။
ယခုကဲ့သို့ သုံးဘီးယာဉ်ငယ်များ ပိတ်ဆို့ရခြင်းမှာ မူဆယ်မြို့ ဆင်ဖြူဂိတ်ပေါက်မှ ကုန်တင်သုံးဘီးယာဉ်ငယ်များနှင့် တရုတ်ဘက် အခြမ်းကျယ်ဂေါင်ဘက်မှ မြန်မာဘက်သို့ ဝင်ရောက်မည့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ၊ ယာဉ်များ၊ လူစုလူ ဝေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့သဖြင့် နှစ်နိုင်ငံတာ ဝန်ရှိသူများရှင်းလင်းခဲ့ရသည်။ ကုန်တင်သုံးဘီးယာဉ်များနှင့် လူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်ရခြင်းမှာ မြန် မာဘက်မှ တရုတ်ဘက်သို့ ဝင်ရောက်မည့်သူများကို တင်းကျပ်စွာစစ်ဆေး ခြင်းနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာန ရွှေလီတို့က တင်းကျပ်စွာစစ် ဆေးမှုများကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကျောက်ပန်းတောင်းနှင့် နတ်မောက် မြို့နယ်တို့တွင် ထန်းပင်များ ခုတ်လှဲရောင်းချပါက ဥပဒေအရ အေ??
ဗိုလ်တထောင် စေတီတော် လုံးတော်ပြည့် ရွှေသင်္ကန်း ကပ်လှူသည့် လုပ်ငန်းများ မိုးကာလအတွင်း ခေတ္တ ရပ?
ဒိုင်လူကြီးကို တံတွေးဖြင့်ထွေးခဲ့သော ရိုးမားတိုက်စစ်မှူးဒီဇီကို ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကျခံရဖွယ်
A Quiet Place နောက်ဆက်တွဲရုပ်ရှင်ကို မကြာမီ ရိုက်ကူးတော့မည်